တချိန်က နေ့ရက်တွေကို လွမ်းတယ် အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းချင်ပြီ အရင်လို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေချင်ပြီလိုပြော လာတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်… – Shwe Naung
N N | May 28, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင် ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်
ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ သူမ ကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ် တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူ ကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက် စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။မတင်တာကြာ လို့တင်လိုက်ပါပြီးနော်။
တချိန်က နေ့ရက် တွေကိုလွမ်းတယ် ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူ ကြော်ငြာတွေရိုက်ကြ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကြ ပွဲတွေအတူတက်ကြ သီချင်းတွေ အတူဆိုကြနဲ့ အခုများကျ တစ်ယောက် တစ်နေရာစီ သူငယ်ချင်းတွေကိုသတိရတယ် အရမ်းလဲတွေ့ချင်တယ်။
အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းချင်ပြီ အရင်လို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ချစ်တဲ့ ပရိတ် သာတ်တွေအတွက် အလုပ်တွေ အများကြီး ကြိုးစားချင်ပြီ 😢မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ 🙏🏻တဲ့ တင်ပေး လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ ပိုးကြာဖြူခင် ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်…
တချိန်က နေ့ရက် တွေကိုလွမ်းတယ် ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူ ကြော်ငြာတွေရိုက်ကြ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကြ ပွဲတွေအတူတက်ကြ သီချင်းတွေ အတူဆိုကြနဲ့ အခုများကျ တစ်ယောက် တစ်နေရာစီ သူငယ်ချင်းတွေကိုသတိရတယ် အရမ်းလဲတွေ့ချင်တယ်
ဒီလောက်ဆို မင်းအားကိုးလို့ရ တယ်တော့လုပ်လိုက်တော့ အေးနော် အသဲလေးတွေ မပေးရင် လက်သီးနဲ့ထိုးမှာ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်….
အားလုံး အလုပ်တွေ ပြန်လုပ် ကြိုးစားနိုင်ဖို့ ကျမတို့ ကျန်းမာဖို့လိုပါတယ် Fighting ပါ အသဲတို့ရေ Love u all ❤️‍🔥❤️ဆိုပြီး ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်…..
ခဏခဏ ကြည့်ပါဆိုတဲ့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့ ပြည်သူ အချစ်တော် မင်းသမီလေး ခေးဆက်သွင် ရဲ့ ကြည့် ရှုသူ အများဆုံး ( ဗီဒီယို)….
အလန်းစား ဖက်ရှင်နှင့် အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းပီး လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ ပုံလေးများ……..
ချစ်စရာ အပြုံးများနှင့် အထာကျကျ ပိုစ့်တွေပေးပီး လှပနေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….